Tue, Mar 19, 2019 | 14:00:37 NST
यस अघिका दुईवटा सिनेमामा संगीतकर्मी भएर काम गरेका सत्यले यसमा फोटोपत्रकार बन्न निकै मेहनत गरेका छन् । यस्तै यसअघिको सिनेमा ‘कर्कश’मा पनि उनले भकभकाउने पात्रमा फिट हुन निकै मेहनत गरेका थिए । आज दोस्रो सिनेमा ‘कर्कश’का केही अनुभवहरु हामीसँग सेयर गरेका छन् ।
वास्तविक र पर्दामा संगीतकर्मी बन्दा
वास्तविक जीवन र रिल जीवनमा संगीतकर्मी हुँदा मलाई खासै केही फरक लागेन । वास्तविक जीवनमा त्यही संगीतमा सक्रिय रहेको मान्छेले पर्दामा पनि त्यही चरित्र निर्वाह गर्न पाउँदा खासै गाह्रो र फरक नहुने रहेछ ।
त्यसमा पनि कथा कता जान्छ, त्यसको क्यारेक्टराइजेशन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले मात्रै अर्थ राख्छ । त्यहाँको अवस्थाले त्यो वास्तविक कलाकारलाई कसरी देखाउँछ भन्ने कुरामा भर पर्छ । त्यो पर्दामा फटाहा हुन्छ कि? अलि बढी इमान्दार हुन्छ कि? त्यो कुरा त्यसको स्क्रिप्टले निर्धारण गर्ने कुरा हो । नभए खासै फरक हुँदैन ।
प्रभात पाण्डेबाट प्रभात लामिछाने
निर्देशक आशिफले यो सिनेमाको स्क्रिप्ट लेख्ने समयमै मलाई सम्झेर लेखेको थियो । उसले यो सिनेमा बलिवुड सिनेमा ‘गान्धीजीका तीनबन्दर’ बाट प्रभावित भएर लेखेको हो जसमाएकजनाअलिकतिआँखाकमजोर हुन्छ जसको भूमिकामा दयाहाङ हुनुहुन्छ ।
अनि अर्को अलिकति कान कम सुन्ने हुन्छ जसमा रेमन दास हुनुहुन्छ । अनि मेरो चाहिँ अलिकति भकभकाउने चरित्र छ । उसले सिनेमाको कथा लेख्ने बेलामै प्रभात पाण्डे भनेर मलाई सम्झेर लेखेको थियो । अनि त्यस समयमा सिनेमा‘लुट’आएको थियो जुन हिट पनि थियो । अनि मैले आशिफलाई पाण्डे भन्ने नराखौँ हेर यो अहिले ‘लुट’मा छ हामी बरु लामिछाने भन्ने राखौँ न भनेर भने । अनि आशिफले पनि मान्यो । मेरो चरित्रको नाम बन्यो प्रभात लामिछाने ।
एक महिने भकभकिने तयारी
सिनेमामा अनुबन्धित भइसकेपछि मैले यो चरित्रको लागि अनुसन्धानहरु गर्न थालेँ । अब जहाँ पायो त्यहिँ भकभकाउनु पनि भएन । अनि त्यहि समयमा मेरो सालो धुलिखेलबाट आएर कुक ट्रेनिङ गरिरहेको थियो । अनि ऊ पनि अलिअलि भकभकाउँथ्यो ।
अनि मसँग बोल्दा चाहिँ लजाउँथ्यो उ । अनि मेरो पालो मैले ऊ ट्रेनिङमा गएको मौका पारेर फोन गर्थेँ । मलाई नदेख्दा भने उ मजाले आफ्नै पारामा बोल्ने गर्थ्यो । अनि मैले आज के सिकायो ? कस्तो पकायौँ ? भनेर सोधिरहन्थेँ । उ बाट मैले के सिकेँ भने भकभकिने मान्छे कुनै पनि ठाउँमा भकभकिन सक्दो रहेछ । कुनै पनि शब्द बोल्दा भकभकिएको मान्छे पछि फेरि त्यही शब्द बोल्दा पनि भकभकिन्छ भन्ने रहेनछ ।
मैले यही क्यारेक्टरको लागि बलिवुड सिनेमा ‘काँटे’ पनि हेरेको थिएँ । त्यस सिनेमामा महेश मान्जेरकर अलिकति भकभकाएर बोल्छन् । मैले सिनेमाको छायाकंन हुनुभन्दा अघिल्ले राति यो सिनेमा हेरेको थिएँ । मैले यो पात्रमा फिट हुनको लागि एक महिना तयारी गरेको थिएँ ।
अरुले इनर्जेटिक भन्दा खुशी लाग्छ
म जहाँ पनि इनर्जेटिक रुपमा प्रस्तुत हुने गर्छु । अनि ‘कर्कश’ मा हामीले राष्ट्रिय सभा गृहमा रातभरि छायाकंन गरेका थियौँ । त्यो राति सबै जना निदाउन खोजिरहेका थिए । तर म चाहिँ बिहानैसम्म फ्रेस थिएँ । रातभरि जिस्किने, चलिरहने गरेर बिताएँ । अनि त्यति बेला मलाई त्यो टिमले तपाईँ त नगल्ने । कस्तो ईनर्जेटिक भन्थे । त्यो सुन्दा र सम्झिँदा खुशी लाग्छ ।